Garaad Ciid ?DF waxay doonaysaa in ay gobolka Gedo ku darto maamulka Bay iyo Bakool ? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2013 5:44 b 0
Garoowe, October 27, 2013 – Afhayeenka isimada Puntland Garaad Cabdulaahi Cali Ciid ayaa mar kale ka hadlay gobollada ka maqan gacanta Puntland ee Sool, sanaag iyo Cayn isagoo ku baaqay in si dhaqso ah arintaas wax looga qabto isla markaasna gacanta Puntland lagu soo celiyo deeganada maqan.
Waxaa uu sheegay Garaad Cabdulaahi Cali Ciid mar uu la hadlay idaacada daljir in dhowr jeer oo horena lagu celceliyey soo celinta deeganada maqan ee Puntland, waxaa uu sheegay soo celinta deegaankaas in ay muhiim u tahay bulshada reer Puntland iyo maamulka intaba.
Isagoo ka hadlayey arrimaha Puntland ayaa Garaad Cabdulaahi waxaa uu bulshada Puntland ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga si looga hortago khataraha ku soo fool yeelan kara gobolka.
Docda kale Afhayeenka isimada Puntland oo ka hadlayey arrimaha gobollada Jubbooyinka, ?waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay weli ku talo-jirto in ay gobolka Gedo ku darto gobollada Bay iyo Bakool ee iyagana la doonayo in maamulka loo dhiso.
?Dowladda Soomaaliya ma doonayso in ay hirgeliso heshiiskii Adis Ababa, waxaa muuqata in dowladdu qorshaynayso in ay gobolka Gedo ka reebto deeganada maamulka Jubba.? Ayuu yiri Garaad cabdulaahi Cali oo shalay dib ugu soo nooqday Puntland xili bilo badan oo ku maqnaa Nairobi iyo Kismaayo.
Dhegeyso: Xaliimo sacdiyo oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Garaad Cabdulaahi Cali Ciid
Al-shabaab oo beeniyey in uu xiriir ka dhexeeyo ciidamada Col. Barre Hiiraale ee Jubbada hoose